fihenan-tsasatra famatsiana varahina fantsona varahina amin'ny valva varahina
Fihenan-tsoavaly fantsom-barotra fandefasana varahina amin'ny valva varahina
fitsapana: Fantsom-pandefasana varahina fampidirana amin'ny valves varahina
Akora: Varahina sy sodina varahina
fitaovana: DW-HF-25kw milina fampandroana fanentanana
hafanana: 932oF (500oC)
Coil: Coil vita amin'ny coated.
Nentin'ny orinasa HVAC ny fangatahana fampiharana ity. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanafoana ny fampiasana ny fomba fiasa ankehitriny, sy ny fanesorana ireo lesoka ary hanatsarana ny fiarovana ny mpandraharaha. Hanombohana ny fitsapana dia nanangona ny fandefasana ny fantsona varahina sy ny valva varahina ny injeniera mpikarakara. Rehefa avy nampihatra fampidiran-dra tamin'izy roa lahy ny injeniera dia nahamaina azy ireo nandritra ny 20 segondra. Mpivarotra dia nampiharina tamim-pitandremana taorian'ny nahatratrarana ny tonon-taolana 932oF (500o C), ary namorona solder iray manodidina ny tonon-taolana. Ny fampiasana ny fanafanana induction dia nahomby tamin'ity rindranasa HVAC ity.
Sokajy Technologies Tags fitrandrahana varahina, induction soldering, induction soldering brass, induction soldering copper, induction soldering machine, soldering, kofehy varahina varahina, fantsom-barahina varahina, fantsona varahina mandranty varahina Post Fikarohana
Fangatahana famafazana ny fanesorana ny famafazana antsokosoko miaraka amin'ny fanamasinana